တရုတ်နဲ့မွတ်စလင်တွေ ဘာ ကွာသလဲ … တရုတ် – ဗမာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ ပီကင်းရေဒီယိုကနေ ဗမာကို ဗြောင်ဆဲတယ် – ဗကပ အလံ နဲ့ တရုတ်ဗော်လံတီယာ ထောင်ချီက ဗမာနယ်မြေထဲဝင်လာပီး မုန်းကိုး ဖောင်းဆိုင် ကုန်ကြမ်း တမြို့ပီးတမြို့သိမ်းပီး လားရှိုးအထိထိုးဖောက်လာတယ် – ဗမာပြည်ပေါက် ဘယ်တရုတ်ကမှ နေဝင်းကိုဖားပီး မော်စီတုန်းကို ကန့်ကွက်စာမထုတ်ခဲ့ဘူး | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeတရုတ်နဲ့မွတ်စလင်တွေ ဘာ ကွာသလဲ … တရုတ် – ဗမာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ ပီကင်းရေဒီယိုကနေ ဗမာကို ဗြောင်ဆဲတယ် – ဗကပ အလံ နဲ့ တရုတ်ဗော်လံတီယာ ထောင်ချီက ဗမာနယ်မြေထဲဝင်လာပီး မုန်းကိုး ဖောင်းဆိုင် ကုန်ကြမ်း တမြို့ပီးတမြို့သိမ်းပီး လားရှိုးအထိထိုးဖောက်လာတယ် – ဗမာပြည်ပေါက် ဘယ်တရုတ်ကမှ နေဝင်းကိုဖားပီး မော်စီတုန်းကို ကန့်ကွက်စာမထုတ်ခဲ့ဘူး
တရုတ်နဲ့မွတ်စလင်တွေ ဘာ ကွာသလဲ … တရုတ် – ဗမာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ ပီကင်းရေဒီယိုကနေ ဗမာကို ဗြောင်ဆဲတယ် – ဗကပ အလံ နဲ့ တရုတ်ဗော်လံတီယာ ထောင်ချီက ဗမာနယ်မြေထဲဝင်လာပီး မုန်းကိုး ဖောင်းဆိုင် ကုန်ကြမ်း တမြို့ပီးတမြို့သိမ်းပီး လားရှိုးအထိထိုးဖောက်လာတယ် – ဗမာပြည်ပေါက် ဘယ်တရုတ်ကမှ နေဝင်းကိုဖားပီး မော်စီတုန်းကို ကန့်ကွက်စာမထုတ်ခဲ့ဘူး
April 11, 2017 drkokogyi
My friend Ingun Jawa wrote asacomment…….
တရုတ် – ဗမာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့
ပီကင်းရေဒီယိုကနေ ဗမာကို ဗြောင်ဆဲတယ်
ဗကပ အလံ နဲ့ တရုတ်ဗော်လံတီယာ ထောင်ချီက ဗမာနယ်မြေထဲဝင်လာပီး
မုန်းကိုး ဖောင်းဆိုင် ကုန်ကြမ်း တမြို့ပီးတမြို့သိမ်းပီး လားရှိုးအထိထိုးဖောက်လာတယ်
ဗမာပြည်ပေါက် ဘယ်တရုတ်ကမှ နေဝင်းကိုဖားပီး မော်စီတုန်းကို ကန့်ကွက်စာမထုတ်ခဲ့ဘူး
မြန်မာပြည်တွင်းက တရုတ်အတော်များများ အရှေ့မြောက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ ဗကပ နဲ့ သွားပူးပေါင်းပီး တိုက်ပွဲဝင်တယ်
မြို့မှာစာသင်ခဲ့ရတော့ ဗကပ ထဲရောက်တော့ တပ်မှူးတေအထိဖြစ်လာတယ်
မန်းလေးသား တရုတ်ကျန်စီမြင့်ဆို အတော်များများသိတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေဝင်းအစိုးရက နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးနဲ့ မွတ်စလင်တွေကို မောင်းထုတ်တယ်
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်က တင်းပီး ထွက်ပြေးလာတဲ့မွတ်စလင်တွေကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ စဉ်းစားတယ်
ဒါကို လုပ်ဖို့ နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံမှုရဖို့ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကို စစည်းရုံးတယ်
(ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ကိုယ်တိုင်လဲ ပါကစ္စတန်ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်တာရယ် genocide အကြောင်းပြ နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရယ်နဲ့ လွတ်လပ်ရေးရလာတာ)
ဒီတော့ နေဝင်းက ရခိုင်ကမွတ်စလင်တွေကို ပြန်လက်ခံတယ်
တလက်စတည်း နိုင်ငံတကာ မွတ်စလင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ သူ့အတွက်မျက်တော်ဖြေပေးဖို့ ပြည်တွင်းက မွတ်စလင်တွေကို ရှေ့နေငှားခဲ့တယ်
အဲ့ လူတွေ ဘယ်သူတွေလဲ
သူတို့ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အမှန်တရားကို မျက်ကွက်ပြုရတာလဲ
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးကို မသုံးသပ်တတ်တာရယ်
ဒီနေ့အထိကို ဒီသမိုင်းတွေကနေ ဘယ်သူ ပညာယူဖို့ ဖွင့်ပြောရဲသလဲ
ကျနော်တွေ့မိသမျှတော့ ပြောရဲသူတောင် လက်ချိုးရေလို့ရတယ်
တလောက မလေးဝန်ကြီးချု ပ်က နဲနဲပါးပါး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အာတိုက်ပြတာကိုတောင်
ပြည်တွင်းက မွတ်စလင်တွေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ
ထောက်ခံသူတွေက ကြိတ်ထောက်ခံပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေက မြန်မာအစိုးရအားကိုးနဲ့လေသံကျယ်ကျယ်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်
← မဘသ တွေ ၉၆၉တွေ ဗမာစစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ မင်းတို့ မတရားသဖြင့် နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်တာခံနေရလို့ အစ္စလာမ်တွေ သွေးပျက်နေကြလိမ့်မယ် ကြောက်နေကြ လိမ့်မယ် လို့များ ထင်နေကြသလား
When former President U Thein Sein and Sr General Min Aung Hlaing trying to cover-up their massacre of about 500 Myanmar Muslims in Meiktila by shamelessly announced that only2persons died, U Win Htein bravely told the Singapore Newspaper that in just one morning he saw at least 40 dead bodies →
One thought on “တရုတ်နဲ့မွတ်စလင်တွေ ဘာ ကွာသလဲ … တရုတ် – ဗမာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ ပီကင်းရေဒီယိုကနေ ဗမာကို ဗြောင်ဆဲတယ် – ဗကပ အလံ နဲ့ တရုတ်ဗော်လံတီယာ ထောင်ချီက ဗမာနယ်မြေထဲဝင်လာပီး မုန်းကိုး ဖောင်းဆိုင် ကုန်ကြမ်း တမြို့ပီးတမြို့သိမ်းပီး လားရှိုးအထိထိုးဖောက်လာတယ် – ဗမာပြည်ပေါက် ဘယ်တရုတ်ကမှ နေဝင်းကိုဖားပီး မော်စီတုန်းကို ကန့်ကွက်စာမထုတ်ခဲ့ဘူး”
According to the Peking radio I heard…Total number of Chinese regular army defected to Ba Ka Pa or Burma Communist Party rebels was 100 THOUSAND. Later they revolted the Burma Communist Party and ESTABLISHED the Wa Army. So Wa army isadisguised Chinese Army. All Bamas are taking pleasure of the screwing of Chinese-Was up to now.